I-Southport/Liverpool (Ainsdale - Formby) imibhede engu-3.
Eduze neRoyal Birkdale/Formby, amanye amakilabhu egalofu. Indlu ethandekayo. Imibhede emibili kanye nombhede wesithathu ogoqekayo.Ingadi enkulu yokuphumula/ichibi/ichibi.(Amanye amagumbi angu-2 asohlwini - i-Southport/Liverpool - Igumbi Elibili - Igumbi Lokulala Elilodwa). Isitimela sendawo esiyi-30 Mins (isigamu semayela) noma imizuzu engama-30 ukushayela ukuya e-Liverpool. Imizuzu eyi-15 ukuya eSouthport. Igumbi lokuphumula/i-conservatory/ingadi/ichibi. Ipaki ku-driveway / umgwaqo. Ubhishi oluseduze/uhambo lwezwe. Amabha/amarestshurenti/izitolo zendawo.
Ukudla kwasekuseni okulula kuyatholakala uma kudingeka. Itiye/ikhofi litholakala noma nini.
Hlanganyela njengoba izivakashi zethu zifisa noma ujabulele ukuhlala ngokuthula - khululeka futhi uphumule. Izihambeli zikhuthazwa ukuba zizenzele ekhaya.
Eduze nosebe lolwandle olunokushona kwelanga okukhazimulayo futhi futhi kungekude kakhulu kukhona amaminithi angu-5 ukushayela endaweni yokulima. Eduze kwe-resort ye-Southport 15 amaminithi ngemoto noma i-Liverpool 30 amaminithi ngesitimela sendawo. Amakilabhu amahle egalofu/Ihholo leFormby eliseduze namachibi okubhukuda, ukuyothenga esigodini, izindawo zokuhamba zezinkuni zikaphayini eduze nolwandle njll. Izindawo zokudlela ezinhle kakhulu, amabha, izindawo zokudlela eziseduze njll okuhlanganisa ne-sparrow hawk pub/restaurant ethandekayo engu-10'mins walk.
Amabhasi aya e-Liverpool nase-Southport njll amisa amaminithi angu-3 kuphela uma ehamba ngesevisi yesitimela yasendaweni futhi njalo ngemizuzu engu-15 eya e-Liverpool noma e-Southport njll. Isiteshi sesitimela esiyimizuzu eyi-10 noma ngaphezulu uma uhamba ukusuka lapha.
Abantu abahamba ekuseni kakhulu bazokwazi ukuthola itiye/ukwenza ikhofi/i-toaster njll.
4.94(128 okushiwo abanye)
4.94 · 128 okushiwo abanye
Hlanganyela ngendlela izivakashi zethu ezifisa ngayo noma uzishiye ngokuthula uma zifuna ukuphumula nokukhululeka. Izihambeli zikhuthazwa ukuba zizenzele ekhaya.